Gobolka Banaadir oo ku guuleystay tartanka koobka kubadda cagta | Dhacdo
Home Wararka Maanta Gobolka Banaadir oo ku guuleystay tartanka koobka kubadda cagta
Gobolka Banaadir oo ku guuleystay tartanka koobka kubadda cagta
Kooxda Gobolka Banaadir ayaa galabta ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uga socday Magaalada Muqdisho, ka dib markii ay gool kulaad kaga adkaatay kooxda Galmudug.
Ciyaarta oo ahayd mid xiiso iyo xamaasad uu ku dheehan yahay ayaa qaybtii 1aad lagu kala nastay 1-1, iyadoo qaybtii labaadna leesla dhaafi waayay barbaro 2-2 ah.
Ciyaarta oo aan lagu darin 30-kii daqiiqo ee dhaariga ayaa toos waxaa leesla aaday gool kulaad, taasoo 3-0 ay ku badisay kooxda Gobolka Banaadir. Guusha ay gaartay kooxda Gobolka Banaadir waxaa ka caawiyay goolhayahooda, kaasoo saddexdii rigoore ay tuurteen ciyaartoyda Galmudug ka qabtay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciyaarta kala socday telefishinada, isagoo ku sugan Aqalka Madaxtooyada ayaa geba-gabadii ciyaarta ugu hambalyeeyay kooxda Gobolka Banaadir guusha ay gaareen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu boggaadiyay taageere-yaasha labada dhinac, sida ay amniga uga qayb qaateen. Madaxweynaha ayaan ka taggin doorkii ay suggida amniga ku lahaayen ciidamada ammaanka, oo uu uga mahadceliyay sida wanaagsan, ee ay ammaanka ciyaarta u suggeen.
Si kastaba ha-ahaatee kulankii adkaa ee maanta ka dhacay Garoonka Injineer Yariisow ayaa noqonaya kiisii loogu daawashada badnaa, dib u dhisidda Dowladnimada Somaliya, iyadoo kumanaan taageere-yaal labada dhinac ah ay garoonka soo buuxiyeen, halka boqolaal kun oo kalana ay shaashadaha kala socdeen.
Previous articleBanaanbax markale maanta ka dhacay Magaalada Beledweyne
Next articleXoghayaha Joogtada ee Xafiiska RW oo xilka la wareegay (SAWIRRO)